उपत्यकामा दिनहुँ सय हाराहारी संक्रमित : बल्ल आइसोलेसन भवन खोजी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २६, २०७७ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह हुन थालेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा जुटेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा दिनमा एक सय जनाभन्दा बढी संक्रमित देखिएपछि आइसोलेसनका लागि खाली भवन खोज्न थालिएको हो । मन्त्रालय सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पहिला तोकिएका आइसोलेसन भरिएपछि कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालमा क्षमता विस्तार गरेर दुई सय शय्या तयार गरिएको छ ।
त्यहाँ चार दिनअघिसम्म २० जना मात्रै संक्रमित राख्ने गरिएको थियो । ‘यो पनि भरियो भने वरिपरिका अरू खाली भवनमा समेत बेड व्यवस्था गरेर संक्रमित राख्ने योजना छ,’ डा. अधिकारीले भने ।
आयुर्वेद अस्पतालको कोरोना संक्रमित व्यवस्थापन टोलीका संयोजक डा. जितेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाएको भवनमा आइसोलेसन बनाइएको हो । क्वारेन्टाइन खाली हुनेबित्तिकै वाईफाई, पानी, बत्तीको व्यवस्था गरेर लक्षण नभएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । तीनतले भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा संक्रमितलाई राखिएको छ । भवनमा महिलाका लागि ४ वटा र पुरुषका लागि ८ वटा मात्रै शौचालय छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि बनाइएको यो भवनमा बाथरुम एउटा पनि छैन । डा. श्रेष्ठले आइतबार राति ९ बजेसम्म १ सय १६ जना संक्रमित भर्ना भएको जानकारी दिए । ‘२० जना संक्रमित व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीले एक सयभन्दा बढीलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । संक्रमित आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने ।
आयुर्वेद अस्पताल वरिपरि खाली भवन खोजेर थप आठ सय जना व्यवस्थापन गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । मनमोहन अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि तयार गरेको इचंगुनारायणको भवनमा पनि दुई सय जना व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । ‘कीर्तिपुर र मनमोहनको भवन पनि भरिए खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको भवनलाई प्रयोग गर्ने योजना छ,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयले यसअघि नै कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न तोकेका बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा १ सय २०, पाटन अस्पतालमा ६०, केएमसीमा १ सय शय्या, टेकुमा ५४ शय्या छन् । ती सबै संक्रमितले भरिएपछि सेना र प्रहरी अस्पतालमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुई अस्पताललाई असार २१ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले लेभल २ मा समावेश गरेको थियो । तर, सैनिक अस्पतालले संक्रमित सेना र प्रहरीले संक्रमित प्रहरीलाई मात्रै भर्ना गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले अर्को विकल्प अघि सारेको हो ।
सरकारी अस्पतालले मात्रै सम्भव नभए ठूला हब अस्पताल र स्याटलाइट अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा राख्न छलफल भइरहेको डा. अधिकारीले बताए । धुलिखेल, सिभिल, वीर, पाटन, टिचिङ र आर्मी हब अस्पताल हुन् । यी अस्पतालको मातहतमा रहेका स्याटलाइट अस्पतालबाट संक्रमितको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, योजना बनाएर ल्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा आइतबार ९२ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ३६ पुगेको छ । काठमाडौंका ९ सय १२ संक्रमितमध्ये १ सय १६ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । ललितपुरमा १ सय ३९ र भक्तपुरमा ८५ संक्रमित भएकामा ३२–३२ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । उपत्यकामा ६ जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले उपत्यकामा संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ६४ प्रतिशत बाहिरबाट आएको पाइएको बताए । ‘संक्रमितको संख्या बढेसँगै कुनै पनि ठाउँ सुरक्षित छैन । सचेत हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । सावधानी अपनाइएको छैन । पसल र रेस्टुरेन्टमा भीडभाड हुँदा हामीलाई तनाव हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ८१ जनाको पीसीआर गर्दा आइतबार ४ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । यसमा तीन जना मन्त्रालयका सहयोगी हुन् । एक जना भने सर्वसाधारण हुन् । ‘मन्त्रालयमा चिया दिने कर्मचारीलाई समेत कोरोना देखिएपछि थप जोखिम बढेको छ,’ ईडीसीडीका निर्देशक डा. पाण्डेले भने ।
ईडीसीडीका अनुसार गंगालाल अस्पतालमा थप चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गंगालालमा संक्रमितको संख्या १६ जना पुगेको छ । त्यस्तै एभरेस्ट बैंकमा तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रहरी र अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि समुदायमा फैलने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका संक्रमित प्रहरीले परिवार र आफन्तलाई समेत सारेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०६:४३
राजपाक्ष श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री
पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षले आफ्ना भाइ तथा वर्तमान राष्ट्रपति गोटाभया राजपाक्षसँग आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् ।
श्रावण २६, २०७७ एजेन्सी
कोलम्बो — श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्ष प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् । उनले राष्ट्रपति गोटाभया राजपाक्षसँग आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् । महिन्दा वर्तमान राष्ट्रपति गोटाभयाका दाइ हुन् ।
७४ वर्षीय महिन्दाले उत्तरी कोलम्बोस्थित ऐतिहासिक केलानिया बौद्ध मन्दिरमा आयोजित कार्यक्रममा भाइ गोटाभया राजपाक्षसँग शपथ लिएका हुन् । शपथलगत्तै दुवै दाजुभाइले राजमहा विहारमा प्रार्थना गरेका थिए ।
अगस्ट ५ मा भएको संसदीय चुनावमा आफ्नो दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) विजयी भएसँगै उनी पुनः प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । २ सय २५ सदस्यीय संसद्मा राजपाक्ष नेतृत्वको गठबन्धनले दुई तिहाइ सिट जितेको छ । एसएलपीपी एक्लैको भने १ सय ४५ सिट छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एसजेबी ५४ सिटमा सीमित भएको छ । तमिल अल्पसंख्यकलाई नेतृत्व गर्ने दल १० सिटमा विजयी भएको छ । त्यसैगरी अन्य १२ साना दलले १६ सिट जितेका छन् । श्रीलंकाको राजनीति पछिल्ला दुई दशक राजपाक्ष परिवारमा केन्द्रित छ । दुई तिहाइ मत ल्याएसँगै अब श्रीलंकाली राजनीतिमा उनीहरूको पकड थप बलियो हुने आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । चुनावी नतिजासँगै गोटाभया राजपाक्षले सन् २०१५ को संविधानले सीमित पारेका राष्ट्रपतीय अधिकार पुनःस्थापित गर्ने अनुमान लगाइएको छ । श्रीलंका सन् १९७८ देखि कार्यकारी राष्ट्रपतिद्वारा शासित रहिआएको थियो ।
तर सन् २०१५ मा भएको संवैधानिक सुधारअनुसार संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकार दिइनुका साथै न्यायिक नियुक्ति, प्रहरी, सार्वजनिक सेवा र चुनावसम्बन्धी निर्णयको अधिकार स्वतन्त्र आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पछिल्लो ऐतिहासिक जितसँगै उक्त आयोगको भूमिका कमजोर हुने आकलन गरिएको छ । गोटाभया राजपाक्ष गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका हुन् । त्यसलगत्तै उनले आफ्ना दाइलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संसदीय चुनावमा महिन्दाका छोरा नमल राजपाक्ष पनि विजयी भएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०६:२९